Otu esi eme ka Windows 10 rụọ ọrụ site na usoro nkuzi a | Nzukọ Ekwentị
Otu esi eme ka Windows 10 rụọ ọrụ site na nkuzi nkuzi nke a
Ụlọ Ignatius | | Sistemụ arụmọrụ, Windows
Na mwepụta nke Windows 10 ihe niile gbanwere na n'adịghị ka nsụgharị ndị gara aga, ihe niile maka mma. Windows 10 bụ ihe dị mkpa mgbanwe na aesthetics na ọrụ Sistemụ arụmọrụ nke Microsoft maka kọmputa, yana imewe ketara Windows 7 na Windows 8.x.
Ka Windows 10 wee ngwa ngwa bụrụ sistemụ arụmọrụ kachasị jiri karịa Windows 7 (ee, Windows 8.x abịaghị nso na ọnụ ọgụgụ nke ụdị a), site na Microsoft ka ha kwere nweta nkwalite zuru oke na Windows 7 na Nwaanyị 8x na Windows 10, na-enweghị ịzụta ikike ọhụrụ.
1 Zọ iji rụọ ọrụ Windows 10
1.1 Akwụkwọ ikike dijitalụ
1.2 Igodo ahia
2 Nweta nkwalite na Windows 10 n'efu
3 Otu esi achọta igodo ngwaahịa m Windows 10
4 Otu esi emegharị Windows 10 mgbe ị gbanwechara ngwaike
5 Mee Windows 10 ka Windows 7 rụọ ọrụ
6 Mee Windows 10 ka Windows 8.x rụọ ọrụ
7 Kedu ihe kpatara na enweghị m ike ịgbalite Windows
7.1 Igodo ngwaahịa na-efu
7.2 Versiondị Windows dị iche iche
7.3 Jirila otu ikikere ahụ na ọtụtụ PC
7.4 Na-eji ikike adịgboroja
7.5 Ngwongwo nke abuo
7.6 Imelitela ihe ndị mejupụtara otu gị
Zọ iji rụọ ọrụ Windows 10
Microsoft na-enye anyị ụzọ abụọ dị iche iche iji mee ka oyiri nke Windows 10 rụọ ọrụ na anyị awụnyere: ikikere dijitalụ ma ọ bụ igodo ngwaahịa.
Akwụkwọ ikike dijitalụ
Ikike dijitalụ bụ nke ejikọtara na otu anyị mgbe nkwalite site na Windows 7 ma ọ bụ Windows 8.1. Enwekwara ike ịchọta ikikere dijital a mgbe ị na-azụta otu Windows 10 n'ịntanetị, ma ọ bụ site na Storelọ Ahịa Microsoft ma ọ bụ site na Amazon.
Typedị ikikere jikọtara na akaụntụ Microsoft anyị, yabụ belụsọ na emezuru ụfọdụ ihe achọrọ, anyị agaghị etinye ya na kọmpụta oge ọ bụla anyị wụnye Windows 10.
Isi ihe dị na ngwaahịa a bụ ngwakọta nke nọmba na mkpụrụedemede enyere anyị mgbe anyị zụtara ikikere anụ ahụ (na DVD) n'ime ụlọ ahịa, n'akụkụ kọmputa ebe arụnyere Windows 10. Anyị ga-abanye koodu a na Windows 10 Ntọala iji rụọ ọrụ ya.
Nweta nkwalite na Windows 10 n'efu
Oge amara iji kwalite n'efu na Windows gara aga na Windows 10 ikpeazụ na August 2016, otu afọ mgbe a tọhapụsịrị ya, Microsoft na-aga n'ihu na-enye ohere melite n'efu, ma ọ bụrụ na i mebeghị ya, ịnwere ike ịnwale ya, ebe ọ bụ na ị nwere ike inwe obi ụtọ ma a gaghị amanye gị ịzụta ikike, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị achọọ ntakịrị na Amazon, anyị nwere ike ịchọta ya maka euro ole na ole.
Ọ bụrụ n’inwebeghị obi ụtọ iji nwee ike iji ikike ị zụtara n’ụbọchị Windows 7 / Windows 8.x gị wee manye gị ịzụta otu (ikikere nke kọmpụta ndị ejiri Windows 7 / Windows 8 rere). x reinstalled bụ ndị zuru oke irè), n'okpuru anyị na-egosi dị iche iche Methodszọ dịịrị iji rụọ ọrụ Windows 10.
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa nwere akwụkwọ ziri ezi nke Windows 7 / Windows 8.x, mana ị nweghị nọmba ikike, anyị nwere ụzọ dị iche iche iji chọpụta, ebe a ga-ajụ koodu a n'oge usoro nrụnye.
Otu esi achọta igodo ngwaahịa m Windows 10
Ọ bụrụ na ịchọta Windows Product Key echekwara na BIOS, natively enweghị wụnye ngwa anyị nwere ike ịmata ya site na PowerShell na nchịkwa ikikere na-eso usoro na m na-egosi gị n'okpuru:
Anyị na-aga igbe nchọta Windows 10, nke dị n'aka nri nke bọtịnụ mmalite, anyị pịnyere CMD ma anyị mepee ha Onye nchịkwa ikike.
Na-esote, detuo na mado usoro iwu ndị a: (Get-WmiObject -query 'họrọ * site na SoftwareLicensingService') .OA3xOriginalProductKey
Ọ bụrụ na ọ laghachi njehie, anyị ga-abanye na ngwa ahụ Windows Key Finder, a free ngwa Mgbe anyị na-eme ya, ọ ga-egosi anyị igodo ngwaahịa nke otu Windows 10 nke anyị wụnyere na kọmputa anyị.
Otu esi emegharị Windows 10 mgbe ị gbanwechara ngwaike
Site na ime ka ikike nke nwanyị di ya nwụrụ 10 rụọ ọrụ, ị ga-ahapụ anyị ka anyị nyochaa na nke anyị bụ nke mbụ yana na ejighị ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. Akwụkwọ ikike ọ bụla na - ejikọ onwe ya na ngwaike akụrụngwaYabụ, ị na - eme mgbanwe ọ bụla kachasị dị na kọmpụta, dị ka motherboard, mgbe ịmalitere kọmputa ahụ, akwụkwọ ikike ahụ agaghị adakọ na kọmpụta ahụ ma gbanyụọ Windows 10 ahụ.
Dochie motherboard na desktọọpụ ọ bụ usoro a na-ahụkarị, Ya mere Microsoft na-enye anyị ohere ijikọtaghachi ikike na motherboard ọhụrụ anyị arụnyere, na-eme usoro nke m kọwara n'okpuru:
Pịa bọtịnụ ahụ Home> Ntọala (cogwheel hụrụ n'akụkụ aka ekpe nke mmalite menu).
Mgbe ahụ, anyị gaba Nwelite na nche> Ebido wee pịa Mee ọ rụọ ọrụ na akaụntụ.
Mgbe ahụ anyị malitere nnọkọ ji akaụntụ Microsoft na paswọọdụ anyị.
N'ikpeazụ, anyị họrọ nhọrọ Emechara m gbanwee ngwaike nke ngwaọrụ a.
Site na ịme usoro a, ikikere Windows metụtara na kọmputa anyị na akaụntụ Microsoft anyị, melite ngwaike metụtara data nke otu. Ọ bụrụ na anyị melite ngwaike ọzọ, anyị ga-agabiga otu usoro ahụ ọzọ.
Mee Windows 10 ka Windows 7 rụọ ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwalite site na Windows 7 na Windows 10 ma ị nweghị nọmba ikike aka, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịma ya iji tinye ya n'oge ntinye ma ọ bụ mgbe e mechara Windows 10 arụnyere na kọmputa.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ya n’aka, anyị nwere ike mafere usoro a ma gaa n'ihu na nwụnye. Ozugbo kọmputa ahụ mechara usoro nrụnye, anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na egosipụtara ozi "Detuo nke Windows 10 anaghị arụ ọrụ" na akụkụ aka nri ala nke ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na anyị emee nwụnye usoro ziri ezi nke Windows 7, n'oge usoro mmalite nke Windows 10 kọmputa maka oge mbụ, sava Microsoft ga-achọpụta ma ọ bụrụ na igodo ngwaahịa ahụ dị irè iji ya. Ọ bụrụ otu a, agaghị egosipụta ozi mmeghe Windows 10.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-ebu usoro ndị akọwapụtara n'okpuru:
N'ikpeazụ, anyị na-abanye ikike nọmba.
Ọ bụrụ na ndị otu ahụ gosipụtara anyị n'ozi Nọmba ikike na ezighi ezi, ọ pụtara na anyị ga-agafe igbe ahụ wee zụta ikike ọhụrụ, Amazon bụ ụzọ iji nweta ikike maka euro ole na ole.
Mee Windows 10 ka Windows 8.x rụọ ọrụ
Usoro iji rụọ ọrụ Windows 10 site na Windows 8.x ọ bụ otu ihe ahụ na Windows 7,, ebe ọ bụ na ngwụsị nke usoro ahụ, anyị ga-achọta Windows 10. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, ị ga-agbaso usoro ndị m kọwapụtara na ngalaba gara aga.
Kedu ihe kpatara na enweghị m ike ịgbalite Windows
Igodo ngwaahịa na-efu
Ọ bụrụ na n'oge usoro mmelite ị na-abanyeghị na igodo ikike na akwaraghị ngwaọrụ ahụ, ị ​​nwere jiri aka gi mee ya na-eso usoro ndị egosipụtara.
Versiondị Windows dị iche iche
Windows dị na ụdị Home, Pro, na Enterprise. Dị Windows ọ bụla nwere ike ịbụ rụọ ọrụ na a kwekọrọ ekwekọ nọmba ikike gaa na mbipute ahụ. Ọ bụrụ na ịnwere ikikere Windows 10 Pro ị gaghị enwe ike ịgbalite otu Windows 10 Home gị, na ntụle otu ihe ahụ ga-eme.
Jirila otu ikikere ahụ na ọtụtụ PC
A na-ejikọ ikikere Windows 10 ọ bụla na ngwaike akọwapụtara, yabụ ị nweghị ike iji ya na kọmputa dị iche iche. Nwere ike ime ka oyiri nke Windows 10 rụọ ọrụ na kọmpụta ebe ị bidoburu ya, ebe enwere ikike na ngwaike ahụ.
Na-eji ikike adịgboroja
Ọ bụrụ na nọmba ikike ma ọ bụ mmalite nke akụrụngwa anyị emeela site na ngwa, nke ndị na-emepụta nọmba ikike enweghị usoro, ị gaghị enwe ike rụọ ọrụ gị oyiri nke Windows iji nweta ọtụtụ n'ime ya.
Ngwongwo nke abuo
Ọ bụrụ na ị zụrụ kọmputa nke abụọ, ọ ga-abụ na ọ bụ ndị na-ere ya i jirila ikike enwere nke ihe kariri otu komputa, nke megidere Usoro Ikikere Ngwanrọ Windows.
Imelitela ihe ndị mejupụtara otu gị
N'okwu a, ị ga-agbaso usoro ndị m gosipụtara na ngalaba ahụ Olee otú imegharịgharị nke Windows 10 mgbe ịgbanwee ngwaike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi eme ka Windows 10 rụọ ọrụ site na nkuzi nkuzi nke a
Ebe nrụọrụ weebụ 20 iji budata eBooks n'efu na iwu
Gịnị bụ mbugharị? Etu esi ebudata ma jiri ya nke ọma